मनोरञ्जन Archives - Samaj Patra
यी हुन् संसारकै हट मेकानिकः ग्यारेजमा हुन्छ सवारी बनाउनेको घुँइचो ! हेराैँ ११ हट तस्बिरहरू
यी हुन् संसारकै हट मेकानिकः ग्यारेजमा हुन्छ सवारी बनाउनेको घुँइचो ! हेराैँ ११ हट तस्बिरहरू टेन्टिन लेगास्पी मेनेसिस कार मेकानिक हुन् । उनले आफू संसारकै सबैभन्दा हट मेकानिक भएको दावी …
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिजसँग एक बर्षदेखि सम्बन्धमा रहेको ठग सुकेश चन्द्रशेखरले गरे खुलासा
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिजविरुद्ध प्रवर्तन निर्देशनालय ९ईडी०ले ठूलो कारबाही गरेको छ । अभिनेत्रीविरुद्ध कारबाही गर्दै ईडीले ठग सुकेश चन्द्रशेखरको जबरजस्ती फिरौती मुद्दामा ज्याकलीनको ७ करोड २७ लाखको सम्पत्ति …
एजेन्सी । फिल्म इन्डस्ट्रीमा सेलेब्सको आपसी सम्बन्ध बारम्बार बिग्रदै गएको छ । तर कतिपयमा राम्रो भएको छ, जुन आज पनि उस्तै गरि रहेको छ। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपुर आज हामी …
टिभि सिरियलबाट रातारात चर्चामा आएकी श्वेता तिवारीकी छोरी पलक छिन् सैफका छोरा इब्राहिमको माया लिप्त
एजेन्सी । टेलिभिजनकी रानी श्वेता तिवारीकी प्यारी छोरी पलक तिवारी छोटो समयमै मनोरञ्जन क्षेत्रमा ठूलो नाम बनेको छ । पलकको ग्ल्यामरस र सिजलिंग लुक्स सामाजिक सञ्जालमा हावी हुन्छ । आफ्नो …
एजेन्सी । जब हामी बलिउडका सबैभन्दा निर्दोष अभिनेत्रीहरूको कुरा गर्छौं, त्यसमा दिया मिर्जाको नाम पनि अगाडी आउने गरेको छ । आफ्नो सौन्दर्य र अभिनयले लाखौं मानिसलाई उनले मायालु बनाएकी छिन् …
आलियाकी आमा सोनीले आफ्ना ज्वाइँ रणवीर कपूरलाई के दिइन् त्यस्तो महंगो उपहार ? जसले पायो संसारभर चर्चा
काठमाडौँ लामो प्रतिक्षापछि रणवीर कपुर-आलिया भट्टको विवाह सम्पन्न भएको छ । अहिले उनीहरुको विवाहको फोटो र बिहेको भित्री विवरणको मात्रै चर्चा भएको छ । आलिया-रणवीरको विवाहको लुकको विवरण सबैलाई थाहा …
काठमाडौ । “वि’र्य वजारमा किन्न पाइन्छ,पुरुषको काम छैन” । अभियान्त सावित्री सुवेदीले एक युट्युव च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिंदै यस्तो विचार ब्यक्त गरेकी छिन् । जय नारीको नारा लिएर सामाजिक सन्जालमा चर्चित …
वैकुण्ठ ढकाल : लेख्न खोजेको विषय अर्कै थियो । ल्यापटप नखोलेको पनि ३९ दिन भइसकेछ । चार्ज सकिएको । रातको ९ बजेर एक मीनेट जाँदा बल्ल खुल्यो ल्यापटप । साइडमा भएको मोबाइल पनि चलाइरहेको …
काठमाडौं – नायिका केकी अधिकारी विबाह बन्धनमा बाधिने भएकी छन् । बुझिए अनुसार उनी आज भोलि मै बिबाह बन्धनमा बाधिन लागेकी हुन् । केकी भन्दा उमेरले कान्छा उमेरका प्रेमी सँग …
काठमाडौं । चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई विश्वकै धनी खेलाडीमा गनिन्छ । खेलकुदबाहेक उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कारण पनि चर्चामा रहन्छन् । यसपटक उनी फेरी गर्लफ्रेन्ड जर्जिना रोड्रिग्वेजको कारण चर्चामा छन् …